Tababar looqabtay Kormeerayaasha waxbarashada - Cakaara News
Tababar looqabtay Kormeerayaasha waxbarashada
Jigjiga( cakaaranews )Khamiis 31 March 2016, Tababar ay fulintiisa iska kaashadeen xafiiska waxbarashada DDSI iyo haayada RTI/USAID islamarkaana loohayay kormeerayaasha dugsiyada kuyaalada 68da Degmo iyo afarta maamul magaalo ayaa lagu soo gabagabeeyay Hoolka shirarka ee Ilyaas Hutel.
Hadaba tababarkan ayaa waxaa shabakada wararka ee cakaaranews uga waramay Gadhwadeenka G/S Horumarinta macalimiinta iyo Hogaaminta waxbarashada ee xafiiska Waxbarashada DDSI mudane Farxaan Cabdi Makhtal oo sheegay in tababarkan lasiiyay kormeerayaasha uu ahaa mid aad muhiim ugu ah. Wuxuuna kula dardaarmay kormeerayaasha inay cilmiga ay barteen ay si daacadnimo ah ugu adeegaan goobaha iyo dugsiyadii ay kukalaqoraayeen. Wuxuuna masuulku tilmaamay in iyaga kormeerayaasha ah laftirkoodana uu jiro kormeer sii kormeeraya. Islamarkaana aysan marnaba sinayn sinaana doonin qofkii shaqadiisa sidaacadnimo ah uga soobaxa iyo midka aan kasoobixin shaqadiisa.
Sidookale wuxuu xusay masuulku intababarkan ay bixinayeen khabiiro u xeeldheer islamrkaana ay rajaynayaan in faaiido wax ku ool ahi ay kasoo bixi doonta dhanka tayada shaqada kormeerayaasha.
ugudanbayna dhankooda waxaa kahadlay kormeerayaashii tabaabrka qaadanaysay oo sheegay in ay faiideesteen casharo muhiima islamarkaana ay uga faaiidaynayaan bulshada ku dhaqan goobihii iyo dugsiyadii ay kakalayimaadeen.